3-qof ayaa ku dhimatay rasaas ay kooxo hubaysan ku fureen gaari rakaab ah,Gelinsoor, Mudug. – Radio Daljir
Maarso 29, 2012 12:00 b 0
Gelinsor, Mar 29 -Inta la hubo saddex qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay rasaas ay kooxo hubaysan ay maanta ku fureen gaari rakaab ah oo marayay inta u dhexaysa magaalada Gaalkacyo iyo deegaanka Galinsoor ee gobolka Mudug.
Wararka ayaa sheegaya kooxaha hubaysnaa inay ahaayeen maleeshiyaad jidgooyo u tiilay inta u dhaxaysa koonfurta magaalada Gaalkacyo iyo deegaanka Galinsoor ee gobolka Mudug.
Tiro dad ah oo ku dhaawacmay rasaasta ayaa la geeyay isbitaalo ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Ma’ahan markii ugu horaysay oo maleeshiyaad hubaysan ay rasaaseeyaan gaadiidka rakaabka ah ee ku safra gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya, inkastaa oo ay masuuliyiinta Galmudug ee ka arrimiya deegaano ka mid ah koonfurta gobolka Mudug ay marar badan sheegeen inay wax ka qabanayaan dhibaatooyinka ay gaysanayaan maleeshiyaadka.
Askari ka mid ah ciidamada daraawiishta ee Puntland oo hal sano oo xabsi ah lagu riday
R/Wasaaraha oo soo gabagabeeyay socdaalkii uu ku tagay Gaalkacyo, kulana la qaatay wefdi sare oo ka socda Midowga Yurub